पुननिर्माण प्राधिकरणलाई थप डेढ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ सिईओ: भुषाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख (सिईओ) युवराज भुषालले भूकम्प पीडितका लागि आगामी बजेटमा प्राधिकरणलाई थप डेढ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेकोले बताएका छन् । बिहीबार काठमार्डौमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भुषालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने,‘आगामी वर्षको बजेटमा प्राधिकरणलाई कम्तीमा डेढ खर्ब बजेट विनियोजन हुनुपर्छ, निजी आवासको पूर्ननिर्माण र जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।’ भुषालले १५ खर्बभन्दा बढिको बजेट ल्याउन नहुने पनि धारणा राखे । उनले भने,‘बाहिरबाट सहयोग, अनुदान वा ऋण आउँछ कि भनेर भर पर्नुहुँदैन्, हामीले नेपालको वस्तुनिष्ठ भएर बजेट ल्याउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् अर्थविद् डा. शंकर शर्माले विकास निर्माणका कामलाई बजेट कम भएको बताए । नेपालमा पछिल्लो समय वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेकोले भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा शर्माको जोड थियो । शर्माले नेपालमा एडीबी र विश्व बैंकको सहयोग बढिरहेकोले नेपालले प्रोजेक्ट बैंकको तयारी गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनेगरि बजेट आउनुपर्ने सुझाव थियो । पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले नयाँ बजेट कम्तिमा पनि १८ खर्बको बजेट आउन सक्ने बताए ।
बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । क्षेत्रीले वर्तमान सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सक्नेपनि संकेत गरे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा जयालादारी कामदारको तलव वृद्धि गर्छु भन्नुभएको छ, विकास निर्माणको कामलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई विश्वासमा लिनुपर्छ, त्यसो हुँदा तलव वृद्धिपनि हुन सक्छ।’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अब ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा संविधान बमोजिमका प्राथमिकताहरु तय गर्नुपर्ने सुझाए । मुलुक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेकोले यो वर्षको बजेटको चाप बढ्नेपनि उनले जनाए । उ
नका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १६ खर्ब समेत पुग्न सक्छ । यद्धपी उनले बजेटको आकारभन्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारले १ खर्ब लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले कम्तिमा पनि ३ खर्ब लगानी गर्ने भएकोले यतातर्फ पनि वर्तमान सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्रकाशित ३ जेष्ठ २0७५ , बिहिबार | 2018-05-17 11:45:59
राम्रा–मिठा कुरा गर्दैमा विदेशी लगानी
तीन वर्ष पहिले काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा मैले पनि ‘कि–नोट स्पिच’ दिएको थिएँ, १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, अहिलेसम्म
पाइलट अभावले थन्किएको वाइ–१२ विमानको
काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वाइ–१२ विमानले पुनः उडान शुरु गरेको छ । विमानचालक (पाइलट) अभावले डेढमहीनादेखि
कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा सामान्य सुधारका
ललितपुर । कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा चालक र यात्रुलाई सहज बनाउनका लागि सामान्य सुधारका काम शुरु भएको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनीले सडक
अब कृषिमा ‘गेम–चेन्जर’ योजना अघि
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले नेपाललाई कृषि तथा पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका साथ काम
११ अर्ब ३८ करोडमा पञ्चासेमा केवलकार
काठमाडौं । पञ्चासेमा ११ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँका लागतमा अत्याधुनिक केवलकार निर्माण हुने भएको छ । केवलकार एण्ड टुर्स लिमिटेड निर्माण
जनताको जलविद्युत्‌को पहिलो शेयर म
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको जलविद्युत् आयोजनाका कार्यक्रमको पहिलो शेयर आफूले खरीद गर्ने उद्घोष गरेका छन् । ऊर्जा,